COD:- Madaxweynaha Puntland Dr. Gaas oo dib ugu laabtay Garowe+Sawirro. – SBC
COD:- Madaxweynaha Puntland Dr. Gaas oo dib ugu laabtay Garowe+Sawirro.
Posted by SBC Editor on May 16, 2015 Comments
Madaxweynaha Dawladda Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas iyo wafdi balaaran oo uu hogaaminayey safar shaqana ugu maqnaa dalalka Talyaaniga, Isutagga imaaraadka carabka iyo Kenya ayaa maanta oo ay taariikhdu tahay 16-5-2014 dib ugu soo laabtay magaalada Garoowe ee caasimadda Puntland.
Madaxweynaha iyo wafdiga la socday ayaa waxaa garoonka diyaaradaha ee Garoowe si weyn ugu soo dhoweeyey Madaxweyne ku xigeenka Puntland Cabdixakiin Cabdullaahi Xaaji Cumar Camey, Gudoomiyaha Baarlamaanka Puntland Siciid Xasan Shire, masuuliyiin ka tirsan golayaasha Dawladda Puntland, iyo saraakiisha sare ee ciidamada Puntland.
Dadweyne aad u fara badan isugana jiray rag iyo dumar kuna labisanaa calanka Puntland iyo kan Soomaaliya ayaa iyaguna ka qeyb qaatay soo dhaweynta Madaxweynaha iyo wafdiga balaaran ee uu hogaaminayey.
Madaxweynaha Dawladda Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa warbaahinta qeybaheeda kala duwan shir jaraa’id oo uu kaga warbixinayo safarkii shaqo ee uu dalka dibadiisa ugu maqnaa ugu qabtay madaxtooyada Puntland ee Garoowe.
‘’Aad baan ugu faraxsanahay in dalka aan dib ugu soo laabto weliba isaga oo nabad ah wanaagsana, muddo labo asbuuc oo shaqo adag ah ayaan ku maqnayn si fiican ayuu noogu soo dhammaaday safarkayagi ’’Ayuu yiri Madaxweyne Gaas.
Madaxweyne Gaas ayaa sheegay in safarka uu dalka dibadiisa ugu maqnaa uu salka ku hayey sidii isbadal muuqda loogu samayn lahaa kaabayaasha dhaqaalaha iyo horumarka Puntland oo hada meel wanaagsan maraya.